I-PixelStick - Uhlelo lokusebenza lwe-Mac Ukukala iPixel, i-Angle, Umbala Esikrinini
Okusheshayo: 1 / 11 / 20
Dinga: IMac 10.6-12.0 +
I-PixelStick - Amathuluzi wokulinganisa esikrinini se-Mac
I-PixelStick iyithuluzi lokulinganisa amabanga, ama-engeli nemibala kusikrini kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza. I-PhotoShop inamathuluzi webanga, i-engeli nombala kodwa asebenza kuphela ku-PhotoShop. I-PixelStick isebenza kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza nanoma ikuphi esikrinini nganoma yisiphi isikhathi futhi ibiza imali ephindwe kayikhulu.
„Ukunquma ikhodi yombala ye-RGB yamaphikseli ngamanye nokwenza izilinganiso zamabanga we-pixel-eqondile esikrinini akukaze kube lula - ngiyabonga ngalolu hlelo lokusebenza oluncane oluhle!" - Alexander
I-PixelStick - Uhlelo lokusebenza lwe-Mac Ukukala i-Pixel, i-Angle, ubuningi besikrini sombala
I-PixelStick iyithuluzi lokulinganisa amabanga (ngamaphikseli), ama-engeli (ngama-degree) nemibala (RGB) esibukweni. I-Photoshop inamathuluzi webanga, i-engeli nombala kodwa asebenza kuphela ku-Photoshop. I-PixelStick isebenza kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza nanoma ikuphi esikrinini nganoma yisiphi isikhathi futhi ibiza imali ephindwe kayikhulu. Kuhle kakhulu kubaklami, amatilosi, abenzi bamamephu, izazi zezinto eziphilayo, izazi zezinkanyezi, abadwebi bamabalazwe, abenzi bezithombe noma ubani osebenzisa imicroscope noma isibonakude noma ofuna ukukala ibanga esikrinini sakhe kunoma iliphi iwindi noma uhlelo lokusebenza.
Chofoza lapha ukuze uzame manje mahhala.
Kulula, kulula futhi kuyashesha. I-PixelStick iyithuluzi lokulinganisa ongalincinza futhi ulule ukukala noma yini esikrinini sakho. Sebenzisa i-eyedropper ukukopisha imibala ngezakhiwo ezi-4 (i-CSS, i-RGB, i-RGB hex, i-HTML) kubhodi yokunameka ukuze isetshenziswe kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza.
I-PixelStick iyithuluzi lokulinganisa lobuchwepheshe elisetshenziswe:
Abadwebi bamabalazwe - bamamephu noma zonke izinhlobo.
Izazi zezinto eziphilayo - ze-microscopy ne-morphology.
Ochwepheshe be-CSI - ngokuphenya izigameko zobugebengu.
Ukukhiqiza - kokwakha nokwakha.
I-Physicists kanye ne-Astronomers - kuzo zonke izinhlobo zokulinganisa.
Ubunjiniyela - bobunjiniyela bemishini, bakagesi nabomphakathi.
Abakhi - ukukala izakhiwo ezikhona noma amapulani.
Imfundo - eyabafundi, othisha nabaphenyi.
Abaqambi - bezithombe, ubungcweti, ingaphakathi, isikhala, ulwandle, nezindiza.
Abathuthukisi beSoftware - ihluzo, iwebhu, ukwakheka nesibonisi somsebenzisi
Ochwepheshe Bezokwelapha - i-X-ray, i-ECG, i-EKG, ne-microscopy.
Noma ngubani odinga ukukala izinto kwi-Mac.
Noma ngubani angasebenzisa iPixelStick ngoba kulula ukuyisebenzisa, elula futhi esheshayo. Linganisa ku:
I-retina, izibonisi ezijwayelekile kanye nabaqaphi abaningi.
IMac OS 10.6 - 10.8 +
Noma yiluphi uhlelo lokusebenza naphakathi kwezinhlelo zokusebenza.
Isekela ukukala ku-Google Amamephu, i-Yahoo Maps, ne-Photoshop. Futhi inezinketho zokulinganisa (ezenziwe ngendlela ehleliwe). I-PixelStick iyithuluzi lokulinganisa ongalincinza futhi ulule ukukala noma yini esikrinini sakho. Kufana nerula ebonakalayo esikrinini ongayisebenzisa zibheka phezulu, zibheke phezulu futhi kunoma iyiphi i-engeli ukukala amabanga (amaphikseli), ama-engeli (amadigri) nokunye okuningi ngokuhudula. Lapho usazi isikali sedokhumenti oyilinganayo ungakha isikali sangokwezifiso ukukala amasentimitha, amamayela, amasentimitha, ama-microns, ama-parsecs noma ama-lightyears.
Okuningi okwenziwa yiPixelStick kusobala. Hudula izindawo zokugcina ukuze ushintshe isilinganiso. Chofoza izingidi ukucindezela ukunyakaza. Yivule, udlale uzungeze, kungabe kusaba nemikhawulo kuhlelo lokusebenza olulodwa ekulinganiseni ibanga, i-engela nombala.
Kulula, kulula futhi kuyashesha. I-PixelStick iyithuluzi lokulinganisa ongalincinza futhi ulule ukukala noma yini esikrinini sakho lapho wazi isikali
Hlola lokhu i-screencast ku-GigaOm ekhombisa iPixelStick iyasebenza.
IPixelStick inembile ngokuphelele futhi isebenza ncamashi nalokho ongethemba ngakho. I-PixelStick ihlala endaweni ephambili ngaphambili esikrinini. Hudula izindawo zokugcina ukuze ushintshe isilinganiso. Chofoza izingidi ukucindezela ukunyakaza. Hudula ukuze ushintshe i-engeli. Bona izinguquko nolwazi kuphaneli elincane lemininingwane yesikrini.
I-PixelStick isebenzisa uhlelo lokuxhumanisa lweCartesian njengohlelo lokuxhumanisa lwe-OS X. Lokhu kusho ukuthi imvelaphi (i-pixel 0,0) ikhona ekhoneni elingezansi kwesokunxele kwesikrini. Kodwa-ke, i-OS X isebenza ikakhulu ngamaphuzu, kanti iPixelStick imayelana namaphikseli. Iphoyinti alinabo ububanzi futhi lihlala phakathi kwamaphikseli.
I-PixelStick ibika bobabili ubude be-pixel nokwehluka kwe-pixel.
Emfanekisweni ongezansi, ukuphakama kwesithombe kungamaphikseli ayi-13, ngakho-ke ibanga libikwa njenge-13.00. Qaphela ukuthi uma iphoyinti lokugcina ledayimane lisesimweni se-y = 1, lapho-ke iphuzu lokuphela kwendilinga lisesimweni se-y = 13. Ngakho umehluko we-pixel ngu-13 - 1 = 12. Ibanga le-pixel lifaka ububanzi bezindawo zokugcina ze-PixelStick. Lokhu kwenzelwa ukuthi usayizi wangempela wento elinganiswayo ubikwe. Umehluko we-pixel umane ususa izixhumanisi.
Lapho ulinganisa, beka iziphetho ezingaphakathi kwendawo ezizolinganiswa.Indlela elula yokuthola bobabili ubukhulu bendawo ukubeka iphoyinti lokugcina ngqo ekhoneni.Ngemva kokulinganisa ubude (bheka isibonelo), iphoyinti lokugcina lombuthano lingahudulwa ngaphezulu kwelinye ikona ukuthola ububanzi.
IPixelStick idinga iMac OS X 10.6 noma eyakamuva.
“Ngisebenzise ababusi bama-screen abahlukahlukene eminyakeni edlule, kufaka phakathi i-Free Ruler kanye nabaphathi be-Art Directors Toolkit. Kepha akukho okusondela kuPixelStick.
IPixelStick yehlukile. Abekho ababusi abazovimba ukubuka kwakho kwesikrini. Esikhundleni salokho, iPixelStick ibonisa umugqa wokulinganisa. Hudula izindawo zokugcina ukuze ulinganise ibanga. Ukukala ubude nobubanzi, beka iziphetho emakhoneni, bese uhudula iphoyinti elilodwa lokuya ekhoneni eliphambene ukukala obunye ubukhulu. Ungakhiya ama-endpoints ukucindezela ubude noma i-angle, noma ukugoqa umugqa uye ku-engela ye-45 ° eseduzane. I-PixelStick futhi ibonisa imihlahlandlela ukukusiza ukukala ngokushesha noma ukuvumelanisa izinto shazi.
Ngaphansi: Uma ufuna ukuphatha isikrini sakho, ungasebenzisi irula, xhawula iPixelStick. ”
URobert Ellis, i-Upstart Blogger
I-PixelStick iyithuluzi lokulinganisa amabanga, ama-engeli nemibala esikrinini. I-PhotoShop inamathuluzi webanga, i-engeli nombala kodwa asebenza kuphela ku-PhotoShop. I-PixelStick isebenza kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza nanoma ikuphi esikrinini nganoma yisiphi isikhathi futhi ibiza imali ephindwe kayikhulu.
* Abaqambi - bezithombe, ubungcweti, ingaphakathi, isikhala, ulwandle, nezindiza.
* Abathuthukisi beSoftware - ihluzo, ukwakheka nesibonisi somsebenzisi.
* Abadwebi bamabalazwe - bamamephu noma zonke izinhlobo.
* Ochwepheshe bezokwelapha - be-X-ray, i-ECG, i-EKG, ne-microscopy.
* Izazi zezinto eziphilayo - ze-microscopy ne-morphology.
* Ochwepheshe be-CSI - ngokuphenya izigameko zobugebengu.
* Ukukhiqiza - kokwakhiwa nokwenziwa kwamanga.
* I-Physicists kanye ne-Astronomers - kuzo zonke izinhlobo zokulinganisa.
* Ubunjiniyela - bobunjiniyela bemishini, bakagesi nabomphakathi.
* Abakhi - ukukala izakhiwo ezikhona noma amapulani.
* Imfundo - eyabafundi, othisha nabaphenyi.
* Abathwebuli zithombe
… Noma ngubani odinga ukukala izinto kwi-Mac.
Noma ngubani angasebenzisa iPixelStick ngoba kulula ukuyisebenzisa, elula futhi esheshayo.
Ukulinganisa kwanamuhla kwe:
* I-Retina, ukuboniswa okuvamile kanye nabaqaphi abaningi.
* IMac OS 10.6 - 10.8 +
* Noma yiluphi uhlelo lokusebenza naphakathi kwezinhlelo zokusebenza.
I-PixelStick iyithuluzi lokulinganisa ongalincinza futhi ulule ukukala noma yini esikrinini sakho.
Sebenzisa i-loupe ukukhulisa noma yini esikrinini.
Sebenzisa i-eyedropper ukukopisha imibala ekhona noma ngabe ikuphi ekuqapheni kwakho ngamafomethi ama-4 (CSS, RGB, RGB hex, HTML) kubhodi yokunameka ukuze isetshenziswe kunoma uluphi uhlelo lokusebenza.
Kufana nerula ebonakalayo esikrinini ongayisebenzisa zibheka phezulu, zibheke phezulu futhi kunoma iyiphi i-engeli ukukala amabanga, ama-engeli nokunye okuningi ngokuhudula. Ngokusebenzisa iphalethi umuntu angakhiya amabanga nama-engeli (futhi ngokusebenzisa inkinobho yokhiye).
Isekela ukukalwa kwe-Google Amamephu, i-Yahoo Maps, i-Photoshop nezinketho zokulinganisa ngokwezifiso.
- Ushintshe ikhodi kampompi yomcimbi
- iMacos catalina 10.15 manje idinga imvume yomsebenzisi "yokuqoshwa kwesikrini" ukuvumela izinhlelo zokusebenza ezifana ne-pixelstick ukubona okuqukethwe esikrinini. manje kulungisiwe
- lapho kwakhiwa i-pixelstick ngezinguqulo ze-xcode 10 nangaphezulu: iwindi alisabonakali, ngakho-ke ubona kuphela i-pixelstick ngemuva okungempunga okumboza isikrini sonke. lokhu manje sekulungisiwe.
uma unenkinga qiniseka ukuthi awumaki futhi uhlole izimvume ze-pixelstick kubumfihlo: ukufinyeleleka, ubumfihlo: ukuqapha okokufaka nobumfihlo: ukurekhoda kwesikrini.
- lapho kwakhiwa i-pixelstick ngezinguqulo ze-xcode 10 nangaphezulu: iwindi alisabonakali, ngakho-ke ubona kuphela i-pixelstick ngemuva okungempunga emboza isikrini sonke. nalokhu manje sekulungisiwe.
- uma unenkinga qiniseka ukuthi awumaki futhi uhlole izimvume ze-pixelstick kubumfihlo: ukufinyeleleka, ubumfihlo: ukuqapha okokufaka nobumfihlo: ukurekhoda kwesikrini.
- Lungiselela ukubonisa okungu-0 kwendawo yombuthano nesikwele kuphaneli ye-pixelstick kwabanye abantu. lokhu kwenzeke uma kuzintandokazi zesistimu: ukulawulwa kwemishini into ethi "Okuboniswayo kunezikhala ezihlukile" ayihloliwe. lokhu, njengoba ungacabanga, bekunzima ukukuthola. siyaxolisa ngokubambezeleka. le nguqulo iyakuxazulula lokho. i-sys pref manje ingasethwa nganoma iyiphi indlela. awudingi ukushintsha noma yiziphi izilungiselelo.
ukuthuthukiswa okukhulu kusesendleleni.
KUBALULEKILE: NgePixelStick 2.12 manje incoma ukuthi isilinganiso sayo esizenzakalelayo sisebenzise izixhumanisi ezibikwe ngqo yi-macOS. Ngaphambilini bekukala lezo zixhumanisi ngesikali esisekela esikrinini "esincike esikrinini" (uqobo olungu-2x kuzikrini zeRetina).
Kodwa-ke "isikali sokwesekwa" asihambelani namaphikseli aphathekayo ngoba i-macOS isekela izinketho ezahlukahlukene zokukala ngezintandokazi zokubonisa, okungekho kuzo okuguqula isikali senkxaso esibikwe yi-macOS kuzinhlelo zokusebenza. Ngokuhambisana nezixhumanisi ezilondoloziwe zangaphambilini, iPixelStick izoqhubeka nokusebenza
lokho kukala uze uvule izintandokazi zePixelStick bese ukhetha "Sebenzisa izixhumanisi ze-MacOS".
[Okusha] Kusetshenziswe kabusha ikhodi ye-loupe ukuze izithombe ezikhulisiwe zesikrini ziphazamise kakhulu futhi zingafaki amakhophi akhulisiwe wezindawo zokugcina ze-PixelStick nemihlahlandlela.
[Lungisa] Vimbela isimo kwezinye izinhlelo lapho isikhombisi sivele khona ekugcineni kanye nemikhakha yesikhi sombala (futhi ngalokho sakhuliswa futhi savinjelwa ukukhetha umbala).
[Lungisa] Susa uhlaka olubomvu ekubambeni kwesikrini sokungeneka.
[Lungisa] Vimbela iPixelStick ekubikeni ububanzi besikrini njengokuphindwe kabili inani lamaphikseli emibiko ye-MacOS. (Le yiyona nkinga yezinguqulo zangaphambilini zePixelStick isebenzisa isikali sokwesekwa kwesikrini seRetina.)
[Lungisa] Ilungise izilinganiso Imibiko yePixelStick lapho ihambisa iPixelStick kusuka esikrinini seRetina kuya kusikrini esingeyona iRetina.
[Lungisa] Dweba kabusha futhi, uma kunesidingo, lungisa iziphetho zePixelStick lapho isikali sesibonisi siguqulwa ngokuncanyelwayo kokukhombisa.
[Lungisa] Nciphisa ukuphindaphindwa kwezinye izibalo zangaphakathi, kuthuthukise ukuvumelana phakathi kwezilinganiso ezingakaliwe nezilinganisiwe.
[Lungisa] Dweba imihlahlandlela yombuthano kahle kuzikrini zeRetina.
[Lungisa] Thuthukisa ukusebenza lapho uhlela amanani ngqo kuphalethi.
[Lungisa] Qhafaza kabili kubha yesihloko sephalethi ukuze ugoqe iphalethi. Lokhu kusho ukuthi chofoza kabili ngaphakathi kokuqukethwe kwephalethi manje ukhethe kahle umbhalo ozowuhlela esikhundleni sokugoqa iwindi.
[Imodi emisha] yemephu yama-engeli akhula ngokwewashi. Uma kuhlanganiswe nokubeka isisekelo kulayini oqonde mpo, lokhu kuhle ngokuthatha amabheringi ebalazweni. [mod] Kubuyekezelwe kunguqulo ephephe kakhudlwana yohlaka lwe-Sparkle Updater. [mod] Ibhukwana libuyekeziwe ukuze lichaze imodi yemephu. Ibhukwana lilapha: https://docs.google.com/document/d/1KqDl9z-s0jOYSFL-YB5XR-NDN0YKRVLVG0N9eHYhjAU/edit
OKUBALULEKILE: Uma unenguqulo 2.5 kuzodingeka ukuthi ulande ngesandla bese ushintsha inguqulo endala ngenguqulo entsha esizeni sethu.
[okusha] Kukhunjulwa izilungiselelo zokugcina nezikali ezisetshenzisiwe zokugcina. [okusha] Manje ingalinganisa ama-engeli ngokuhlobene nesisekelo esingemuva sokuvundla. [mod] I-engela nobude manje buvezwa ngokunemba okungaphezulu (isb.kungalinganiselwe kumanani amanani aphelele).
[mod] Ihambisana ne-Mac OS 10.6 - 10.11
[okusha] Izintandokazi zomsebenzisi zokubonisa noma zokufihla i-loupe ekhonjisiwe lapho uhudula amaphoyinti. [okusha] Isethingi yokuncanyelwayo komsebenzisi yokubonisa noma yokufihla igridi ngaphakathi kwesigaxa (lapho isikhombi sikhonjiswa).
[lungisa] Ukubuka kwe-Loupe manje kusebenza naku-OS X 10.6 (ngaphambili bekungavela kuphela ku-OS X 10.7 noma ngaphezulu).
[lungisa] Yenza ukuvala iwindi lezintandokazi liziphathe ngendlela ejwayelekile. [lungisa] Buyisela isithonjana sohlelo lokusebenza olulahlekile bese ufaka izinguqulo ze-hi-res.
[okusha] Ukusekelwa kokuncanyelwayo komsebenzisi kwe- "Screens have Spaces separate" kungezwe ku-OS X Mavericks.
[mod] ihlanganiswe ne-xcode 6.1.1 [mod] ehambisana neMac OS 10.10 - 10.6
[okulungisiwe] Isikhi sombala sikhombisa umbala ongalungile kokunye ukuhlelwa kwesikrini, ikakhulukazi lapho izikrini zesibili zihlelwe ngaphezulu noma ngaphansi kunesikrini sokuqala.
[fixed] I-Loupe ayikhulisi indawo elungile yesikrini ezikrinini zesibili kwezinye izilungiselelo zesikrini.
[kulungisiwe] Ukusetha kabusha isikhundla kungaholela emaphoyinti wokugcina asusa isikrini ngaphandle kwamalungiselelo wesikrini.
[fixed] I-PixelStick ayinwebeli esikhaleni sesikrini esisanda kuvezwa lapho izilungiselelo zesikrini zishintshwa ngenkathi i-PixelStick isebenza.
[fixed] Ukuphahlazeka ku-OS X Mavericks nangaphezulu lapho kukhethwa irula "lezinto zesikrini" ngaphezu kwesikhathi esisodwa.
[okusha] le nguqulo ngezilokotho ezinhlelweni zezivakashi uBernie Maier wase-Australia. ukubonga kufanele kubhekiswe kuye ngalesi sipho seholide. UBernie ukhombe izingqinamba ngokusekelwa kwesikrini esiningi futhi wazinyathela wazibethela wenza okunye ukuthuthuka. Sibonga kakhulu ngaye ngokukwazi kwakhe ukushesha asheshe, aqonde futhi enze umnikelo omkhulu kwiPixelStick.
[lungisa] ukuthuthuka okuncane okuhlukahlukene. [kuvuselelwe] izithonjana nemidwebo ethile
[fix] kubasebenzisi be-Mac OS 10.6 nayo ingahle isebenze ngo-10.5 (asikwazi ukuhlola, sazise). OKUBALULEKILE: Abasebenzisi be-Mac OS 10.7. Sicela uqinisekise ukuthi ufake inguqulo yakamuva ye-Mac OS. IPixelStick ngeke ivule ngaphandle kokuthi u-10.7.5 abe nokuvuselelwa kwakamuva. Isizathu ukuthi lolu hlelo lokusebenza lusayinwe ngekhodi futhi lisebenzisa umgcini wesango (ama-apula ezokuphepha zakamuva) kanti u-10.7.5 uvuselelwe ukusingatha lokho. Imininingwane yalokhu kubuyekeza ilapha: http://support.apple.com/kb/DL1599?viewlocale=en_US&locale=en_US
[mod] ihluzo ezibuyekeziwe, izithonjana nomsebenzi wokubukiswa kwe-retina (ngenxa yomsebenzisi uDamien).
[lungisa] izikhombisi ziyanyamalala ngaphansi "kombhede ongabonakali". lokhu kwenzeka uma usebenzisa izibonisi eziningana noma umane ushintsha ukulungiswa kwesikrini (sibonga abasebenzisi bakaColin Murray's).
[fix] isikhundla sephaneli enkulu asilondolozwanga kuzinguqulo ezindala ze-OS X (sibonga umsebenzisi uChris Pritchard).
[mod] yenziwe ikhodi yahlanganiswa ne-xcode 4.4.
[mod] imibhalo ethuthukisiwe.
[okusha] kusayindwe iplamu emangalisayo ngesitifiketi sikanjiniyela wama-apula ukulandela imihlahlandlela yakamuva yezokuphepha ye-apula.
[okusha] 100% iyahambisana ne-mac os 8. ukuthuthuka okuningi okuzayo ...
[mod] ungeze into engu-5-th kwimenyu yefomethi yombala i-RGB
[mod] ibhale kabusha ikhodi ephathelene nosayizi wepaneli engu-100% yebhubesi (Mac OS 10.7) ehambisanayo.
[mod] 100% ibhubesi (Mac OS 10.7) iyahambisana.
i-eyedropper entsha ikhombisa umbala ongaphansi kwesikhombisi ngamafomethi angu-4 (css, html, rgb integer, rgb hex)
[new] eyedropper ikopisha umbala ngaphansi kwesikhombisi usebenzisa ikhophi (umyalo c) ngefomethi ekhethiwe.
ukubuka okusha okusondeziwe kuboniswa ngaphansi kwesikhombisi.
[okusha] izinguquko zesixhumi esibonakalayo somsebenzisi nezengezo.
[mod] ikhodi ivuselelwe, yathuthukiswa futhi yathuthukiswa.
amasethingi [amasha] enziwe ngokwezifiso ngokungeziwe kumathempulethi e-google namamephu we-yahoo naku-photoshop.
[Fix] wanezela ikhophi bese unamathisela kungxoxo yokubhalisa.
Abasebenzisi bahlambalaza ngePixelStick ku-MacUpdate
Chofoza kunombolo yenguqulo ukuthola leyo nguqulo yakudala yePixelStick.
Lesi isixhumanisi se-changelog esingasiza ekutholeni inguqulo ye-Mac OS endala. Izovulwa kuthebhu entsha, ishiye leli windi livuliwe
Ukufunda Amazinga Okushisa Kwasolwandle (SST) kusuka kusithombe seSathelayithi Kusetshenziswa iPixelStick kwi-Mac
I-PixelStick Use In Navigation and Cartography.
I-PixelStick Isetshenziswe ku-Graphic Design
Ngezansi i-screencast evela eGigaOM
I-PixelStick Use In Meteorology, Climatology kanye ne-Atmospheric Physics.
I-PixelStick Ekuklanyeni Kwezipikha
Nasi isixhumanisi kuleyo ndatshana yokwakhiwa kwesipika. (ngenhla)
I-PixelStick Demo Elula
Sazise ukuthi uyisebenzisa kanjani iPixelStick ukuyifaka lapha.